Guriga Jacaylka ee Taj Mahal oo halis ugu jira inuu burburo - BBC News Somali
29 Nofembar 2018
Image caption Taj Mahal
Taj Mahal waa dhismaha ugu caansan dalka Hindiya, wuxuuna sannad walba soo jiitaa malaayiin ruux oo dalxiiseyaal ah, laakiin dayac tir la'aan iyo wasakh wuxuu halis ugu jiraa inuu burburo.
Madaxdii ugu dambeysay ee dhismaha Taj Mahal uu ku dhex wareejiyay waxaa ka mid ah madaxweynaha Sri Lanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil.
Image caption Mr Khan wuxuu sheegay in Muddadii 30-ka sano ahayd ee uu howshaas waday ay timihiisa marba marka ka dambeysa sii caddaanayeen,
"Mararka qaar ceeb ayaan dareemaa markii ay dalxiiseyaasha ajaanibta ah i weydiiyaan sababta loo dayac tiri la'yahay Taj Mahal. Waxay sidoo kale i weydiiyaan sababta uu uga sii dhamaanayo dhaldhalaalkii uu lahaan jiray. Annagu haddii aan nahay dadka dalxiiseyaasha haga, su'aalahan wax jawaab ah uma heyno".
Xilliga ay Diana sawirkaas galeysay wuxuu ahaa dhowr bilood ka hor intii aan la shaacinin inuu go'ay xiriirkii jacayl ee ka dhexeeyay iyada iyo Prince Charles, oo ah dhaxal sugaha boqortooyada Ingiriiska.
Image caption Pincess Diana oo hor fadhisa Taj Mahal
Iyadoo dad yar uun ay rajeynayaan inuu dumo Taj Mahal, Maxkamadda ugu sarreysa ayaa muujineysa in ay su'aal dhab ah ka taagantahay mustaqbalka Taj Mahal.